Uncategorized Archives - Business Centric Network (BCN)
MSME Books ဆိုတာ ☁️ ??Cloud Based Accounting Software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့?? ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရှင်းတမ်းတွေကို လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှူ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MSME Books မှာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရာများကတော့ ?ကုန်ပစ္စည်း အဝင်၊အထွက်နှင့် လက်ကျန်စာရင်း ?ငွေသား အဝင်၊အထွက်နှင့် လက်ကျန်စာရင်း ?ဘဏ် အဝင်၊အထွက်နှင့်လက်ကျန်စာရင်း ?အရောင်းစာရင်း(လက်ငင်း၊အကြွေး) ?အဝယ်စာရင်း(လက်ငင်း၊အကြွေး) ?ရရန်ရှိ၊ပေးရန်ရှိစာရင်းများ ?ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း ?ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစာရင်းများ ?လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်မှု၊အရှုံးအမြတ်စာရင်းနှင့်အစမ်းရှင်းတမ်းများ စသည့်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ☁️ ??Cloud Based Accounting Software ဖြစ်သည့် အတွက် ⏱အချိန်၊✈️နေရာမရွေးကြည့်နိုင်ခြင်း၊?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? သုံးစွဲသူဦးရေကန့်သတ်မထားခြင်း၊? ? ?ဆိုင်ခွဲများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ? ? ?ဆိုင်အလိုက် ❓ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်အရေအတွက် ကြည့်နိုင်ပါသည်။… Continue reading MSME Books (up to 30% promotion)
Tagged Cloud Based Accounting SoftwareLeaveacomment
January 27, 2019 January 27, 2019 San Thida
company မှတ်ပုံတင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ် trademark မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာထည့်ခြင်း စာရင်းရေးဆွဲပေးခြင်း စာရင်းကိုင်ဆော့လ်ဝဲ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအတွက်လဲ လိုအပ်သော အကြံဉာဏ်ပေးပါတယ် *** company မှတျပုံတငျ ဝနျဆောငျမှုပေးပါတယျ trademark မှတျပုံတငျခွငျးနှငျ့ သတငျးစာတှငျ ကွျောငွာထညျ့ခွငျး စာရငျးရေးဆှဲပေးခွငျး စာရငျးကိုငျဆော့လျဝဲ ရငျးနှီးမွှပျနှံမှုအတှကျလဲ လိုအပျသော အကွံဉာဏျပေးပါတယျ 09 977 160 671
Accounting, Accounting Software, Cloud, Digital Accountant, MSME Books, Uncategorized
MSME Books Up to 25% Discount
January 23, 2019 December 5, 2019 San Thida
Up to 2️⃣5️⃣ Percent #DiscountAccounting Solutions for Micro, Small and Medium Enterprises @ MSME Booksလစဉျပေးခမြှေု ?၃၀,၀၀၀ ကပျြ(၃) လတဈခါပေးခမြှေု ?၈၁,၀၀၀ ကပျြ (တဈလ ၂၇,၀၀၀ ကပျြသာ ကသြငျ့ပါသညျ။)(၆) လတဈခါပေးခမြှေု ?၁၄၄,၀၀၀ ကပျြ(တဈလ ၂၄,၀၀၀ ကပျြသာ ကသြငျ့ပါသညျ။)(၁) နှဈတဈခါပေးခမြှေု ?၂၂၅,၀၀၀ ကပျြ(တဈလ ၂၁,၀၀၀ ကပျြသာ ကသြငျ့ပါသညျ။)⁉️မိတျဆှေ သငျက လကျရှိစီးပှားရေးလုပျငနျးတဈခုကို ဦးဆောငျနသေူလား။⁉️စာရငျးအငျးပိုငျးဆိုငျရာ အခကျအခဲတှကွေုံတှနေ့ရေသလား။⁉️ကြှမျးကငျြတဲ့ စာရငျးကိုငျတဈယောကျရှာဖို့အခကျကွုံနလေား။အထကျပါ အခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီပွီဆိုရငျတော့ မိတျဆှရေဲ့ အခကျအခဲတှကေို ??ဖွရှေငျးပေးမညျ့ ☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတျဆကျပေးပါရစေ။☁️?MSME Books နဲ့… Continue reading MSME Books Up to 25% Discount
November 11, 2018 November 11, 2018 San Thida
[Zawgyi] လစဉ်ကြေး ၁၅၀၀၀၀ ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ 09 977 160 671 09 254 677 192 09 795 560 474 သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ။ [Unicode] လစဉျကွေး ၁၅၀၀၀၀ ကပျြမှ စတငျ အသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ 09 977 160 671 09 254 677 192 09 795 560 474 သို့ ဆကျသှယျ စုံစမျးနိုငျပါပွီ။
[Zawgyi] လစဉ်ကြေး ၃၀၀၀၀ ကျပ်မှ စတင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ 09 977 160 671 09 254 677 192 09 795 560 474 သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါပြီ။ [Unicode] လစဉျကွေး ၃၀၀၀၀ ကပျြမှ စတငျ အသုံးပွုနိုငျပါပွီ။ 09 977 160 671 09 254 677 192 09 795 560 474 သို့ ဆကျသှယျ စုံစမျးနိုငျပါပွီ။
October 13, 2018 San Thida
ဝန်ထမ်းကြိုတင်ငွေထုတ်ပေးတာကို MSME Books မှာ ဘယ်လိုစာရင်းသွင်းမလဲ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီကိုအသေးစိတ် မှတ်ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဝန်ထမ်းကြိုတင်ငွေဆိုတဲ့ စာရင်းခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ ဝန်ထမ်း စာရင်းဖွင့်ပါမယ်။ ကြိုတင်ငွေ ထုတ်ပေးတာကိုတော့ အသုံးစာရင်းမှာ စာရင်းသွင်းပါမယ်။ လစာထုတ်တဲ့အခါ ပြန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Payslip မှာနုတ်ပေးရပါမယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အထွေထွေလယ်ဂျာမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ပုံလေးတွေမှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားလို့ စမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ *** ဝနျထမျးကွိုတငျငှထေုတျပေးတာကို MSME Books မှာ ဘယျလိုစာရငျးသှငျးမလဲ ဝနျထမျး တဈဦးခငျြးစီကိုအသေးစိတျ မှတျထားခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဝနျထမျးကွိုတငျငှဆေိုတဲ့ စာရငျးခေါငျးစဥျရဲ့အောကျမှာ ဝနျထမျး စာရငျးဖှငျ့ပါမယျ။ ကွိုတငျငှေ ထုတျပေးတာကိုတော့ အသုံးစာရငျးမှာ စာရငျးသှငျးပါမယျ။ လစာထုတျတဲ့အခါ ပွနျဖွတျမယျဆိုရငျတော့ Payslip မှာနုတျပေးရပါမယျ။ နောကျဆုံးအနနေဲ့ အထှထှေလေယျဂြာမှာ စာရငျးသှငျးလိုကျရငျရပါပွီ။ အသေးစိတျကိုတော့… Continue reading ဝန်ထမ်းကြိုတင်ငွေ ဝနျထမျးကွိုတငျငှေ
September 18, 2018 San Thida
Tagged AttituteLeaveacomment
September 4, 2018 September 3, 2018 San Thida
အခုတလောမကြာခဏ လုယက်မှု၊ဖောက်ထွင်းမှုတွေကြားသိနေရတယ်။ ချက်ချင်းဖမ်းမိတဲ့ အမှုတွေမှာ CCTV တပ်ဆင်ထားလို့ အဲ့ကနေ လူပုံပြန်ဖော်ပြီး အမြန်ဆုံး တရားခံကို ဖမ်းမိကြတယ်။ သင့်ဆိုင် (သို့) အိမ်ကို လုံခြုံရေးအတွက် CCTV လေးတပ်ဆင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ နဲ့ ၀၉၇၉၅၅၆၀၄၇၄ ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ လိုအပ်ရင် တပ်ဆင်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပါရှိပါတယ်။ *** အခုတလောမကွာခဏ လုယကျမှု၊ဖောကျထှငျးမှုတွှေကားသိနရေတယျ။ ခကျြခငျြးဖမျးမိတဲ့ အမှုတှမှော CCTV တပျဆငျထားလို့ အဲ့ကနေ လူပုံပွနျဖျောပွီး အမွနျဆုံး တရားခံကို ဖမျးမိကွတယျ။ သငျ့ဆိုငျ (သို့) အိမျကို လုံခွုံရေးအတှကျ CCTV လေးတပျဆငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ နဲ့ ၀၉၇၉၅၅၆၀၄၇၄ ကို အခုပဲ ဆကျသှယျလိုကျပါ။ လိုအပျရငျ တပျဆငျပေးတဲ့ ဝနျဆောငျမှုပါရှိပါတယျ။ ##CCTV##Installation